ข่าวด่วน ข่าวดัง – Page 227
ချစ်မေမေကသီချင်းတွေဆိုပြနေတာကို ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့အိုက်တင်မျိုးစုံနဲ့ကပြနေတဲ့ ခေတ်လေးသစ်လေးတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
March 12, 2019 thaihotnews 0
သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့ပရိသတ်အချစ်တော်အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွယ်စုံရ အနပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာမိသားစုဘဝလေးတွေထဲမှာ ပရိသတ်အားကျနေရပြီး ပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ လင်းလင်းနှင့် ချစ်သုဝေတို့မိသားစုဘဝလေးကိုတော့ အားလုံးလေးစားအားကျမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ချစ်စရာသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ကို မွေးဖွားထားပြီး ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားမိသားစုတစ်စုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်လေးတို့မိသားစုလေးဟာ မကြာခင်ရက်ပိုင်းက ခရီးတွေဆက်တိုက်ထွက်ကာ အမှတ်တရပုံလေးတွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့မေမေနဲ့အတူဆော့ကစားကာ ချစ်မေမေသီချင်းတွေဆိုပြနေတာကို ချစ်စရာအမူရာလေးတွေနဲ့ ကပြနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်လေးတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ခေတ်လေးသစ်လေးတို့ရဲ့ ချစ်စရာဟန်ပန်လေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ……ချစ်ပရိသတ်တွေတွက် ချစ်သုဝေတို့ သားမိသုံးယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Source:Chit […]
မဲညစ်နေတဲ့ ဂျိုင်းသားတွေကို ချက်ချင်းဖြူဖွေးသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများ
အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အလှအပဆိုတာ အလေးထားဂရုစိုက်ရပေမယ့် ယောကျာ်းလေးတွေအတွက်ကတော့ အရေးကြီးချင်မှာ ကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ယောကျာ်းလေးတွေက ပိုပြီး မိန်းကလေးတွေထက်တောင် အလှအပ နဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလှအပဆိုင်ရာကုသနည်းတွေက အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေကို အကုန်ပြောင်အောင် လုပ်နိုင်တာကြောင့် ဆေးခန်းသွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာနေရင်းလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လှပအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ထိုနည်းလမ်းတွေအများကြီးထဲကမှ ဘယ်ဆေးတွေပဲ သုံးသုံး မဖြူနိုင်တဲ့ […]
နိုင်ငံအတွက် ရွှေတွေရယူပေးခဲ့ပြီး ရုပ်ရည် ငွေကြေး အောင်မြင်မှု အားလုံးပြည့်စုံနေပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်သက်သေသွားတဲ့ စက်ဘီးစီးမယ်လေ
သေခြင်းတရားဆိုတာ လူတွေမြန်ပါတယ်ပြောကြတဲ့ အမြန်ဆုံးကားတွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ထက်တောင် မြန်ဆန်တာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျတ်သွားမှ အမှန်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အားကစားသမားတွေလဲ အားကစားလုပ်လို့ အသက်ရှည်ကျန်းမာတယ်ဆိုတာ သိပ်တော့မမှန်ပါဘူး။ အိုလံပစ်ဆုတံဆိပ်ရှင် စက်ဘီးအားကစားမယ် ကယ်လီကက်တလင်းဟာ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်မှာပဲ သေဆုံးသွား တယ်လို့ အမေရိကန်စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်က တနင်္ဂနွေနေ့က ကြေညာပါတယ်။ ကယ်လီဟာ(၂၀၁၆)ရီယိုအိုလံပစ်မှာ အမျိုးသမီးအသင်းလိုက်အမီလိုက်ငွေဆုကို အမေရိကန်အသင်းအတွက် ရယူပေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကို နှစ်ကြိမ်ဆက် ရယူထားပါတယ်။ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က သူ့ နေအိမ်မှာပဲ မနေ့ညက သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး […]
လင်းလင်းရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေအောက်မှာ မမှတ်မိလောက်အောင်ပြောင်းလဲလှပသွားတဲ့ မအေးသောင်း
မအေးသောင်းလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးအေးဝတ်ရည်သောင်းဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်စွာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တာကို ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ရင်သက်ရှုမောဖွယ် တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင် မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းကိုလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…။ သူမဟာဆိုရင် “ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ….။ သူမရဲ့ လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဆိုရင်တော့ photo shooting တွေရိုက်ကူးလေ့ရှိပြီး၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….။ ခရီးသွားဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီး ခရီးသွားပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း အမြဲလိုလိုတင်ဆက်ပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်…။ […]
လင်းလင်းရဲ့ အကြမ်းစားROCKသီချင်းတွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေအားမန်အပြည့်နဲ့ ကခုန်သီဆိုနေကြတဲ့ ဗီဒီယိုလေး
လူကြီးလူငယ် မရွေး ခံစားတတ်ကြတဲ့ Rock ဂီတကို သီဆိုကြပြီး အောင်မြင်ကြတဲ့ Rocker အဆိုတော်တွေဟာ ဒီခေတ်(၂၁)ရာစု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတလောကမှာ အဆိုတော်တွေထဲမှာ လင်းလင်းလဲ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ “ငါ့ဘက်ကမှားတာပါ” သီချင်းနဲ့ စတင်လူသိများခဲ့သလို သူ့ရဲ့ နောက်ထပ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ တေးစီးရီးတိုင်းကလည်း အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူမလေး အဆိုတော်၊မင်းသမီး ချစ်သုဝေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ခေတ်နဲ့ သစ် ဆိုတဲ့ အမြွာလေးသမီးလေးနှစ်ယောက်ရသည်ထိ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို ဦးဆောင်နိုင်သူ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို ခပ်မိုက်မိုက် ပို့စ်တွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်နဲ့သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကတော့ သူ့ရဲ့ချောမောခန့်ညားတဲ့ ပင်ကိုယ်စတိုင်တွေကြောင့် ခဏလေးအတွင်းမှာတင် လူသိများ အောင်မြင်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ဦးလို ရုပ်ဖြောင့်တဲ့ ပိုင်တံခွန်က အခုဆိုရင် ကြော်ငြာနဲ့ Photo Shooting အများအပြား ရိုက်ကူးနေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ပိုင်တံခွန်က သူ့ကိုချစ်တဲ့အမာခံ ပရိသတ်အမြောက်အများ ရရှိထားပြီး အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတော့ သူရဲ့အချစ်ရေးကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ကောင်မလေးတွေနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်ကာ ပရိသတ်တွေကို အမြဲစနောက်တက်တဲ့ […]
NEW YORK — A colossal sculpture that will give people more than 150 interconnected stairways to climb is opening to the public as part of New York City’s Hudson Yards development. Vessel isametal […]
HEJERE, Ethiopia — A growing number of airlines groundedanew Boeing plane involved in the Ethiopian Airlines disaster asaglobal team of investigators began picking through the rural crash site on Tuesday. Some […]
Chicago Symphony musicians trade piccolos for picketing…
CHICAGO — Striking musicians at the Chicago Symphony Orchestra are grabbing picket signs instead of piccolos afteralack of progress in contract talks. The musicians picketed Monday in front of Orchestra Hall,aday […]
Honda recalls 1.2M more vehicles with dangerous air bags in US
DETROIT — Honda is recalling about 1.2 million vehicles in North and Central America because their Takata air bag inflators can explode and send shrapnel into the passenger compartment. The recall covers many Honda and […]
« 1 … 226 227 228 … 311 »